Iyo 7 Maitiro Eakabudirira Webhu 2.0 Kunyorera | Martech Zone
Muvhuro, October 30, 2006 Chitatu, October 8, 2014 Douglas Karr
Dion Hinchcliffe akanyora chinyorwa chikuru kuAjax Developers Journal, heino chinyorwa changu chandinofarira:
Izvo Zvakakosha zveLeveraging Webhu 2.0
Kudekara Use ndicho chinonyanya kukosha pane chero Webhusaiti, Webhu kunyorera, kana chirongwa.
Vhura yako data zvakanyanya sezvinobvira. Iko hakuna ramangwana mukuhodha dhata, kungozvidzora.
Nehasha wedzera mhinduro zvishwe kune zvese. Dhonza zvishwe izvo zvisingaite zvinoita kunge zvine basa uye simbisa izvo zvinopa mhedzisiro.
Kuenderera mberi kuburitsa macircule. Iyo yakakura kuburitswa, inowedzera kusanzwisisika inova (kuwanda kutsamira, kuronga kwakanyanya, kukanganisika kukuru.) Kukura kwehupenyu ndiko kwakanyanya kusimba, kunochinja, uye kusimba.
Ita kuti vashandisi vako ive chikamu che software yako. Iwo ndiwo ako akakosha sosi yezvinyorwa, mhinduro, uye kuda. Kutanga kunzwisisa kwehukama hwehukama. Regedza isiri-yakakosha kutonga. Kana vashandisi vako vangangoenda kumwe kunhu.
Chinja maapplication ako mumapuratifomu. Chikumbiro chinowanzove nekushandisa kamwechete kwakatemerwa, chikuva dhizaini kuve hwaro hwechimwe chinhu chikuru. Panzvimbo pekuwana mhando imwechete yekushandisa kubva kune yako software uye data, unogona kunge uri mazana kana zviuru zvavo.
Usaiti gadzira nzanga dzevanhu kungova navo. Ivo havasi? 'Ta yekutarisa chinhu. Asi ipa simba vashandisi vakafemerwa kuti vagadzire ivo.
Ini ndaizowedzera chimwezve chinhu, kana kuwedzera pa 'Nyore Yekushandisa'. Mukati meEase Ekushandisa pane zvikamu zviviri:
Usability - iyo nzira inotorwa nemushandisi pakuita mabasa inofanirwa kunge iri yechisikigo uye isingade kudzidziswa kwakanyanya.
Dhizaini huru - Ndinovenga kubvuma izvi, asi dhizaini yakasarudzika inobatsira. Kana iwe uine yemahara kunyorera, pamwe haina kukoshesa; asi kana iwe uri kutengesa sevhisi, saka itarisiro yekuve nemifananidzo yakanaka uye marongero epeji.
Chinja kunyorera kwako kuve mapuratifomu uye kuenderera kuburitsa macircuit zvese zvinokweretesa kune 'widget, plugin, kana kuwedzera-pane' tekinoroji. Kana paine nzira yekuvaka kunze kwechikamu chekushandisa kwako icho chinobvumira vamwe kuti vavake mazviri, uchaenda kunosimudzira budiriro kupfuura mhiri kwemadziro ekambani yako.
Handina chokwadi chekuti ndinobvumirana ne'Vhura data rako 'asi ini ndinobvumirana nekushandisa data rako. Vhura data muzuva rino uye zera rinogona kuve husiku hwekuvanzika; zvisinei, kuburitsa data rinopihwa nevashandisi vako kutarisira. Kana ini iwe ukandibvunza kuti ndinofarira sei kofi yangu, ndinovimba kuti nguva inotevera pandinowana kofi, ndiyo nzira yandinoifarira! Kana zvisiri, usandibvunze pakutanga!
Tags: budirirochikwiriro2.0 web